URonaldo ushaya amagoli amasha – eba ngumshayi magoli ophakeme kunabo bonke | Scrolla Izindaba
URonaldo ushaya amagoli amasha – eba ngumshayi magoli ophakeme kunabo bonke
UCristiano Ronaldo akakhombisi zimpawu zokwehlisa ijubane ekufuneni kwakhe ukuba ngumdlali webhola omkhulu kunabo bonke owake wabonwa emhlabeni.
Lo mdlali oneminyaka engama-35 ubonakale eba ngumshayimagoli ophume phambili kunabo bonke ngeSonto ebusuku ngesikhathi esiza i-Juventus inqoba ngokushaya i-Udinise ngamagoli amane kwelilodwa.
URonaldo ushaye amagoli amabili, weqa umlando omude kaPele wokuma kwamagoli angama-757. Lo mdlali wase-Portugal useshaye amagoli angama-758 eqenjini nasezweni futhi usebe ngumshayi magoli wesibili ophakeme kunabo bonke.
UPele ubhalise amagoli angama-757 ngesikhathi edlala e-Santos, e-New York Cosmos nase-Brazil phakathi konyaka wezi-1956 nowezi-1977. Manje umdlali omkhulu wase-Brazil ungowesithathu ohlwini lwabadlali bonke noRonald omi ngemuva komdlali onamagoli angama-759 wase-Austria uJosef Bican.
URonaldo uzoba nethuba lokulingana futhi aze adlule uBican lapho i-Juventus izovakashela i-AC Milan kusasa ebusuku. I-Juventus isele ngamaphuzu ayishumi kubaholi be-log i-Milan ngomdlalo isesandleni futhi umdlalo wakusasa ebusuku uzobaluleka ekuvikeleni kwabo isicoco se-Serie A.
Irekhodi elisha likaRonaldo lishiya uLionel Messi endaweni yesine phakathi kwabashayi magoli abaphambili. Lo mdlali wase-Argentina, naye oshaye amagoli amaningi eqenjini lakhe i-Barcelona nezwe, unamagoli angama-742 egameni lakhe.
Izolo ebusuku lo mdlali oneminyaka engama-33 udlale umdlalo wakhe wama-500 kwi-Barcelona ngesikhathi benqoba ngegoli elilodwa eqandeni, beshaya i-Heusca ekuhambeni. Ngeminyaka emibili emncane kunoRonaldo, uMessi usawasebenzisa amathuba akhe wokwephula noma yiliphi irekhodi lamagoli amaPutukezi afinyelela kuwo ngaphambi kokuthatha umhlalaphansi.
UMessi angahamba yonke indlela futhi adlule irekhodi lokushaya amagoli likaBican noPele.
Naba abashaye amagoli aphezulu abayishumi emhlabeni webhola:
* UJosef Bican – amagoli angama-759
* UCristiano Ronaldo – amagoli angama-758
* UPele – amagoli angama-757
* ULionel Messi – amagoli angama-742
* URomario – amagoli angama-734
* UGerd Muller – amagoli angama-720
* UFerenc Puskas – amagoli angama-706
* U-Eusebio – amagoli angama-615
* I-Ferenc Deak – amagoli angama-558
* U-Arthur Friedenreich – amagoli angama-554